Semalt निकाय र ज्ञान ग्राफ अनुकूलन सिफारिश गर्दछ
के तपाईं आफ्नो वेबसाइटमा सामग्री अप्टिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सोचिरहनुभयो? हामीले यसलाई प्राप्त गर्न सक्ने तरिकाहरूका बारे हामी छलफल गर्दैछौं। अझै, हामीसँग Google SERP मा गुणस्तरको स्थिति प्राप्त गर्न मद्दत गर्न सक्ने अर्को तरीका छ जुन गुगल ज्ञान ग्राफका लागि सान्दर्भिक जानकारी प्रदान गरेर हो।
Semalt मा हरेक दिन, हामी डिजिटल मार्केटिंग उद्योग मा अन्य पेशेवरहरु संग छलफल को लागी धेरै समय खर्च गर्न को लागी हाम्रो ग्राहकहरु को वेबसाइटहरु खोज इंजन मा बाहिर आइटम र ज्ञान ग्राफ अनुकूलन बनाउन नयाँ तरिकाहरू संग आउन। हामीले महसुस गर्यौं कि भविष्यको लागि खोजी वास्तविक विश्व वस्तुहरूमा बढी केन्द्रित हुँदै गएको छ। आश्चर्यजनक रूपमा, गुगलले खोज परिणामहरूमा एन्टिटी सम्बन्धित जानकारी समावेश गर्न नयाँ तरिकाहरू खोज्दै छ। त्यस्ता प्रगतिहरू सम्भावित क्वेरिहरूको लागि धन्यवाद छ। तपाईको साइटलाई परिभाषित गर्ने निकायहरूलाई अनुकूलन गरेर, तपाई Google वेबसाइट ग्राफको लागी तपाईको वेबसाइटलाई अप्टिमाइज गर्दै हुनुहुनेछ र यिनी अस्तित्व गुगल ज्ञान प्यानलमा देखा पर्दछ भनेर निश्चित गर्दै हुनुहुन्छ।
आज, स्थानीय खोजी ईकाईमा आधारित खोजहरूमा अग्रणी छन्, र यसको महत्त्वपूर्ण Semalt यस स्थानमा के हुँदैछ ध्यान दिन्छ। स्थानीय एसईओ वर्षको लागी अस्तित्वमा रहेको छ, जसले तिनीहरूको वेबसाइट नभए पनि व्यवसायहरुलाई श्रेणीकरण गर्न अनुमति दिन्छ। गुगलले वास्तविक-विश्व भ्रमणहरू ट्र्याक गर्न सुरू गरिसक्यो, र उनीहरूले हालसालै गुणस्तर भ्रमणहरूलाई साइट क्रममा प्रयोग गर्ने प्याटेन्ट प्राप्त गरे।
आज, वेब मालिकहरूले तपाईंको एन्टिटीहरू परिभाषित गर्न तपाईंको कुर्नस्टोन सामग्रीको ठूलो मात्रामा टाई आवश्यक छ, जुन गुगलले चिन्न सक्छ वा हुन सक्दैन। शब्दार्थ नजिकको संस्थाका वरिपरि लेखेर, तपाईले प्रयोगकर्ताको यात्राको उत्तर दिन अझ राम्रो कार्य गर्नुहुन्छ तपाईले प्रदान गर्ने उत्तम सामग्रीबाट मात्र होइन कि गुगलले तपाईको राम्रो प्रयास देख्दछ।
संस्थाहरु के हुन्?
यस लेखमा, तपाईले शब्द संस्थालाई दुई पल्ट उल्लेख गरेको सुन्नुभयो, तर यसको मतलब के हो? परम उत्तर मेसिन, गुगल बन्न, सेप्टेम्बर २ on मा, गुगलले ह्युमिंगबर्ड अपडेटको साथ अगाडि बढाइयो। यो प्रमाण हो कि गुगलले सेमेन्टिक वेब टेक्नोलोजी अपनाइरहेको छ र यसलाई पुरानो एल्गोरिथ्मको साथ मिलाएर। यो पाठ र उत्तरहरू लिंक गर्ने गूगल समाधान थियो। यो कुरा हो जुन हामीले ज्ञान ग्राफलाई विचार गर्छौं, तब भ्वाईस खोजी र अब गुगललाई जन्म दिन्छ। यी सबै तत्वहरूले ईन्टरनेटमा सोध्ने प्रश्नहरूको उत्तर प्रदान गर्दछ र कहिलेकाँही प्रश्नहरूको पूर्वानुमान पनि गर्न सक्दछ।
SEO मा, संस्थाहरू मानिस, ठाउँ, वा चीजहरू हुन्। धेरै सरल एन्टिटीहरू बुझ्नका लागि, कसैले यो बुझ्नुपर्दछ कि गुगल ज्ञान ग्राफ एक इकाई ग्राफ हो कि गूगलको अर्थ बुझाउने खोजी वा अस्तित्व खोजको उपयोगका लागि गुगलको पहिलो चरणहरू प्रतिनिधित्व गर्दछ।
Google को अनुसार, एक इकाई चीज वा अवधारणाको रूपमा परिभाषित छ जुन अद्वितीय, एकवचन, राम्रोसँग परिभाषित छ, र सजिलैसँग छुट्याउन मिल्ने।
एकाइलाई परिभाषित गर्दा, तपाईंले बुझ्नु पर्छ कि इकाई सधैं भौतिक वस्तु हुँदैन। संस्थाहरू र colors्ग, मिति, विचार, र अधिकको रूपमा पनि आउन सक्छन्।
निकाय खोजीहरू अधिक सही विधि बट्स हुन् जुन उनीहरूको प्रयोगकर्ताको मनसाय बुझ्दछन् जबकि खोजी क्वेरीको जवाफ दिन थप प्रमाणित स्रोतहरू म्यापि .् गर्दा। यो यसरी सोच्नुहोस्; इकाई खोज बट्सको लागि तपाइँले सोध्नु भनेको के हो भनेर सोध्ने वा सोध्ने सम्भावनाको एक तरीका हो, र त्यसपछि उनीहरूले पहिले नै खोजिएका क्वेरीहरू प्रयोग गरेर यस जानकारीलाई प्रशोधन गर्छन् जुन तपाईले खोज्नु भएको कुराको समानता तपाईलाई उत्तम परिणामहरूको साथ आउँदछ।
Googles ज्ञान ग्राफ
गुगलको ज्ञान ग्राफ एउटा ठूलो डाटाबेस हो जुन मे १,, २०१२ मा खोजिएको थियो, गुगलले खोजीहरूलाई अधिक उपयोगी र सान्दर्भिक नतिजा प्रदान गर्नका लागि। यो डेटाबेसले अर्थपूर्ण खोज अनुक्रम अधिक प्रासंगिक खोज परिणामहरू प्रदान गर्न प्रयोग गर्दछ।
अब तपाई गुगल ज्ञान ग्राफ को अर्थ के हुन सक्छ धेरै स्पष्टीकरण पाउनुहुनेछ। यद्यपि तिनीहरू अधिकतर जटिल र बुझ्न गाह्रो हुन्छन्। त्यसैले हामीले गुगल ज्ञान ग्राफको अर्थ के हो भनेर बुझ्नको लागि हामीले एउटा सरल तरिका बनाइसकेका छौं। ज्ञानको गोदामको बारे सोच्नुहोस्, डाटाबेस जसले मानव इतिहासमा सबै जानकारीहरू पाउनको लागि खोज्दछ। यो गुगलले प्राप्त गर्ने आशा गर्दछ, र तिनीहरूलाई यो प्राप्त गर्न तपाईंको सहयोगको आवश्यक पर्दछ।
विकिपेडिया, सीआईए, वर्ल्ड फ्याक्टबुक, र फ्रीबेस जस्ता साइटहरूबाट जानकारी स collecting्कलन गरेर, गुगलले घटनाहरू, व्यक्तिहरू, इतिहास, र कुनै पनि अन्य सम्बन्धित विषयको बारेमा डाटा भेला गर्न सक्दछ।
हमिंगबर्ड पाण्डा र पिजन जस्ता नियमित एल्गोरिथ्म अपडेटको साथ, हामी गुगलले यो लक्ष्य प्राप्त गर्न बढी प्रयास गर्दैछौं। उनीहरूले डाटाबेस सिर्जना गर्न सक्दछन् जुन प्रयोगकर्ताहरूले सोध्न सक्ने हरेक प्रश्नका उत्तरहरू हुन्, र यो डाटाबेस खोज ईन्जिनहरूको माध्यमबाट पहुँच गर्न सजिलो हुनेछ जहाँसुकै भए पनि।
खोजी ईन्जिन मुख्य रूपमा डाटा स collect्कलन गर्न र यसलाई जो कोहीले पनि त्यस्ता जानकारीका लागि खोजी गर्न पर्दा पछाडि डिजाइन गरिएको हो। त्यस्ता डाटाको स्ग्रहले त्यसपछि ज्ञान डाटाबेस बनाउन शुरू गर्दछ।
गुगलको ज्ञान ग्राफ तथ्यहरू, ठाउँहरू, र व्यक्तिहरू सँगै जानकारीहरू राख्नको लागि गुगलको व्यवस्थित तरीका हो जुन एक अर्कोसँग जोडिएको खोज परिणामहरू प्रदान गर्न प्रयोग गरिन्छ जुन अधिक खोज र खोजी क्वेरीसँग प्रासंगिक छ। अब तपाईले देख्न सक्नु हुन्छ हामी सतहबाट किन व्याख्या गर्नुपर्‍यो।
विशेष रूपमा, ज्ञान ग्राफ लाखौं बिटहरूको डाटाबेस हो र विभिन्न कुञ्जी शव्दहरू बारे डेटाको टुक्राहरू मानिसहरू वर्ल्ड वाइड वेबमा खोजी गर्न मन पराउँछन् र पहिले नै उपलब्ध सामग्रीमा आधारित यी खोजीहरूको पछाडि उद्देश्य। यस्तो ज्ञानको साथ, खोजी ईन्जिनहरूको लागि प्रयोगकर्ताहरूलाई तथ्यहरू, ठाउँहरू, र एक तरीकाले वा अन्य तरिकामा जडानको फारम साझा गर्ने व्यक्तिहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गर्न सजिलो हुन्छ।
हामीले के भन्न खोजिरहेका छौ त्यो अझै निश्चित छैन, छोटो व्यायाम गरौं, हैन त। तपाईंको ब्राउजर खोल्नुहोस् र प्रसिद्ध अभिनेताहरूको खोजी गर्नुहोस्। तपाइँ प्रसिद्ध स्क्रिनको कारउजेल देख्नुहुनेछ जुन तपाइँको स्क्रिनको माथि देखा पर्दछ। यो एक ज्ञान ग्राफ परिणाम को एक स्पष्ट उदाहरण हो।
यो एसईओमा महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले केवल तपाईंको ज्ञानको आधार फराकिलो गर्दैन, तर यो तपाईंलाई फाइदा हुन सक्छ किनभने जब शोषण हुन्छ, यसले तपाईंको साइटमा बढी ट्राफिक प्राप्त गर्न सक्छ।
तपाईं यो कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? Semalt काममा लिई, हामी राम्रो सामग्री वा सामग्री संरचनाहरू सिर्जना गर्न सक्दछौं जुन ज्ञान दर्शक प्यानल मार्फत तपाईंको श्रोतालाई राम्रोसँग स .्लग्न गर्दछ। यो द्रुत रूपमा एसईओ प्रवृत्तिको रूपमा समात्दै छ, र धेरै कलाकारहरू र उद्यमीहरू पहिले नै गरिरहेका छन्; तपाईं यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
अस्तित्वको मिश्रण र गुगलको ग्राफ अप्टिमाइजेसन
हामी तपाईंको ब्रान्ड वा व्यवसायलाई अस्तित्वको रूपमा विकास गर्दछौं। मूल उद्योग रिपोर्टहरू प्रकाशित गरेर, नयाँ प्रोफेशनल सल्लाह जुन हामी तपाईंलाई गुगलको रूपमा हेर्न सक्दछौं एन्टिटीको रूपमा हेर्नका लागि। यो यी इकाई सम्बन्धित संकेत हो कि आश्चर्यजनक गर्न को लागी तपाइँको वेबसाइट को रंक प्राप्त सुनिश्चित गर्दछ।
अब हामी संस्था र गुगल ज्ञान ग्राफ मा हेरेका छौं यी तीन श्रेणीकरण कारकहरु फेरि हेरौं।
एसईओ परिप्रेक्ष्यमा, सामग्री एक सम्बन्ध वा सम्बन्धमा संस्थाहरूको मिश्रण हो। यदि हामीले एउटा कथन बनायौं भने, "SEO विकास भइरहेको छ।" त्यहाँ इकाई "SEO" र अर्को इकाई विकास गर्दै छ। जे होस्, दुबै निकायहरू सम्बन्धमा जोडिएका छन् जुन सामग्रीमा विकसित हुन्छन्।
जब हामी अर्थ र लिंकहरूको आधारभूतहरूमा गहिरो डुबुल्की लिन्छौं, तब हामी बुझ्छौं कि लिंकहरू एन्टिटीहरू बीच जोडिएका हुन्छन् हामी वा गुगलले उनीहरूलाई त्यस्तो मान्नु अघि नै। लि्कहरूले नेटमा पृष्ठहरू बीचको सम्बन्ध र दिशा निर्देशन गर्दछ। यी पृष्ठहरू एन्टिटीले भरिएका छन् जुन अन्य संस्थालाई समावेश गर्दछ।
जब प्रयोगकर्ताले गुगलमा कुनै पनि क्वेरी खोजी गर्दछ, खोजी ईन्जिन एल्गोरिदम द्रुत गतिमा कार्यमा सर्छ, वेब पृष्ठहरूमा निकायहरू (सामग्री र लि )्क) लाई खोज क्वेरीमा लि link्क गर्ने प्रयास गर्दै। यद्यपि गुगल ज्ञान ग्राफ यस प्रक्रियामा थप गरिएको छ सूचनाको पहुँच छिटो, अधिक पहुँचयोग्य र प्रयोगकर्ताको अभिप्रेतित आवश्यकताको लागि बढी उपयुक्त बनाउन। "सर्वश्रेष्ठ जन्मदिनको उपहार के हो?" जस्ता क्वेरीका लागि? गुगल नॉलेज ग्राफले क्वेरीलाई राम्रो परिणामको उत्पादन गर्न व्याख्या गर्दछ। खोज क्वेरीमा इनपुट एन्टिटीहरूको अध्ययन गरेर, गुगल ग्राफले अर्को एन्ट्रीको पूर्वानुमान गर्न सक्दछ, जसले प्रयास र समय कम गर्दछ जसले उनीहरूको प्रश्न वा खोज क्वेरीहरू इनपुट गर्न खर्च गर्दछ। यसैले माथिको उदाहरणमा, गुगलले तपाईंलाई केहि प्रश्नहरू सोध्न कोशिस गरिरहनुभएको वास्तविक प्रश्न बोक्न सक्ने पहिले केही संस्थाहरू टाइप गरेपछि तपाईंलाई विकल्पहरू देखाउन सुरू गर्दछ।
हामी अब भन्न सक्छौं कि गुगल ज्ञान ग्राफ एक अस्तित्व ग्राफ हो। तपाईलाई क्वालिफाइ गर्न वा तपाईको वेब सामग्री गुगल ज्ञान ग्राफमा बनाउनका लागि तपाईले सर्वप्रथम गुगलबाट निकाय मान्नुपर्नेछ। यसको मतलब यो हो कि यदि तपाईं ईकाई हुनुहुन्न भने, तपाईं गुगल वा यसको एल्गोरिथ्ममा अवस्थित हुनुहुन्न। त्यसोभए पत्ता लगाउन, Semalt तपाइँको ब्रान्ड र वेब सामग्री अनुकूलन गर्दछ।